विदेशबाट आउँदा कमिसनको लोभमा सुन ल्याइदिँदै हुनुहुन्छ ? पक्राउ पर्नुहोला ! - Cyprus-Nepal.com
कमजोर आर्थिक अवस्था सुधार्न खाडी पुग्नेहरु सुनको कमिसनको लोभमा घर नपुग्दै जेल पर्न थालेका छन् ।
सुन तस्करहरुले खाडीबाट स्वदेश फर्कने नेपालीहरुलाई सुन नेपाल पुर्‍याइदिए कमिसन दिने गरेका छन् । तर सोही अवैध सुन नेपाल ल्याउँदा प्रहरी चेकजाँचमा त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा उनीहरु पक्राउ पर्दै आएका छन् ।
सुन तस्करहरुले दुवइ, मलेसिया, कतारमा रहेका नेपालीहरुलाई घर फर्किने बेला सुन नेपाल पुर्‍याइदिएवापत कमिसन दिने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
सुन तस्कर गर्नेहरुले घर फर्किन लागेका नेपालीहरुको खोजी गर्छन् ।
विमानस्थलमा विभिन्न समयमा काम गरिसकेका प्रहरी अधिकारीहरु भन्छन्,“गरिबीले विदेश गएकाहरु सानो लोभमा पर्छन् । त्यहाँ रहेका तस्करहरुले बाला, औँठी, सिक्री बनाएर सुन उनीहरुलाई भिराउँछन् । काठमाडौंमा तस्करका एजेन्ट आउँछन् सुन लैजान्छन् । त्यही क्रममा धेरैजसो पक्राउ पर्छन् । पक्राउ परेपछि कानुनी प्रक्रियामा जाँदा जेल समेत जान्छन् ।”
तस्करहरुले विदेशबाट सुन दिएर पठाउने नेपालीको फोटो, हुलिया सबै विवरण नेपालमा रहेका एजेन्टलाई पठाउँछन् ।
उनीहरुले भाइबर, ह्वाट्एपलगायतका सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै फोटोसहितको विवरण पठाउँछन् ।
विमानस्थलमा एजेन्टहरु आउँछन् । विमानस्थलबाट बाहिरिनेबित्तिकै उनीहरुले सम्पर्क गर्छन् । सुन लिएर जान्छन् आवश्यक कमिसन दिन्छन् ।
उनीहरुले सुनको मात्रा हेरेर कमिसन दिने गरेको पटक–पटकको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसएसपी राजेशनाथ बास्तोला तोकिएको मापदण्ड र अवैध रुपमा ओसारपोसार भएको सुनसहित प्रहरीले कयौंलाई पक्राउ गर्दै आएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार धेरैजसो विदेशबाट काम गरेर स्वदेश फर्किनेहरुले तस्करको सुन बोकेर ल्याउँछन् भने कतिपय गिरोह भिजिट भिसामा गएर तस्करीमा लागेको समेत पाइएको छ ।
एसएसपी बास्तोला लोभमा परेर अवैध कारोबारमा संलग्न नहुन विदेशमा रहेका नेपालीलाई सुझाव दिन्छन् ।
आइतबार (हिजो) पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फको आगमन पार्किङ एरियाबाट १ सय ४९ दशमलव ५ ग्राम सुनको बाला ३ थान सहित २ जना पक्राउ परे ।
पक्राउ पर्नेहरुमा भक्तपुर दुवाकोट बस्ने सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका–७ ठेगाना भएका ३३ वर्षीय समुन्द्र दंगाल र काठमाडौं बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–१२ बस्ने संखुवासभा खाँदबारी नगरपालिका–११ ठेगाना भएका ४३ वर्षीय सन्तबिर राई रहेका छन् ।
आइतबार नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ७ सय ५० ग्राम सुन बाला १४ थान र सिक्री १ थान प्रहरीले बरामद गरेको छ ।
सिंगापुर र मलेसियाबाट काठमाडौं आएका यात्रुहरुलाई सुन बोकाई भन्सार छली गर्न लगाई काठमाडौं विमानस्थलमा संकलन गर्न लागेको भन्ने सूचनाको आधारमा सो सुन बरामद गरेको हो ।
सो क्रममा प्रहरीले विमानस्थलको विभिन्न स्थानहरुबाट शंकास्पद १५ जना यात्रुहरुको साथबाट सो सुन बरामद गरेको हो ।
अनुसन्धानको क्रममा उनीहरुलाई सुनका बाला तथा सिक्री मलेसियाको विमानस्थल र आसपासबाट नामथर स्पष्ट नखुलाएका व्यक्तिहरुले दिई पठाएको र उक्त सामान काठमाडौं विमानस्थल आसपास तथा विभिन्न होटलहरुमा रिसिभ गर्न आउने व्यक्तिलाई दिनु भनेर ल्याएको खुलेको छ ।
बरामद सुन जस्तो देखिने धातु तथा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई थप अनुसन्धान तथा आवश्यक कारवाहीको लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय गौचर पठाइएको छ ।
नेपालमा वैध बाटोबाट सुन ल्याउँदा लाग्ने भन्सार शुल्क नपरोस् भनेर सुन तस्करले तस्करीको नयाँ तरिका अपनाउन थालेका हुन् ।
प्रहरीले विमानस्थलमा दिनुहँजसो सुनसहित विदेशबाट स्वदेश फर्किएका नेपालीहरुलाई पक्राउ गर्दै आएको छ ।
बार्हखरीमा प्रकाशित सामाग्री